| Mutambo Wokushanyira: 043
ZUVA 01 : COCHIN - MUNNAR (140 KMS - 04 Maawa anotya)
Kusvika paCochin Airport (kusangana & rubatsiro paunosvika) uye enda kuNunnar, paunosvika uende kuIndaneti. Zuva panguva yekuzorora. Usiku huno kugara muNunnar.
ZUVA 02 : MUNNAR
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemachingwa kunotarisa kunoona nzvimbo yeKunnar - shanyira Mattupetty Dam, Kundale Lake, Echo Point, Shooting Point uye Eravikulam National Park. Usiku huno kugara muNunnar.
ZUVA 03 : MUNNAR - THEKKADY (110 KMS - 03 Maawa anotya)
Mushure mekudya chamangwanani akangobva kutora kubva kuHotel uye uende kuThekkady (Periyar), paunosvika uende kuIndaneti. Masikati anoenderera mberi nekuona nzvimbo yeThekkady. Usiku huno kugara muThekkady.
ZUVA 04: THEKKADY - KUMARAKOM (140 KMS - 04 Hours drive)
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani go to Kumarakom. Tarisa-in paimbabhoat iyo inokutora iwe kuti unakidzwe nemashiripiti aKanakom nokuenda paNyumbaboat (Kettuvallam) yendova kumhenderekedzo yegungwa. Shandisa maawa anotevera e21 muimba yako inotenderera. Unakidzwe nemvura zhinji yeKerala nekuwana maonero eupenyu hwemusha uri pedo; chinhu chakasiyana uye chisingakanganwiki. (chengetedza nguva 12.30 PM - A / C ichashanda kubva ku9.00 PM kusvika ku6.00 AM) Fadzwa nekuvira kwezuva & gara usiku husiku pane chikepe cheimba. Chikudya chamangwanani, masikati uye kudya kwemasikati kwakabatanidzwa.
ZUVA 05 : KUMARAKOM - COCHIN (100 KMS - 03 Hours drive)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya ngavabve kubva ku Houseboat (chengetedza nguva 9.30 AM) uye motai kuenda kuChochin Airport / Railway Station kuenda mberi.